नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको खतरा : बढ्नुको एउटा कारण चाँडै सर्ने 'यूके भेरिअन्ट'! - Himalayamail.com
काठमाडौं । नेपालमा पनि केही सातायता कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरको खतरा टड्कारो देखा परेको छ। प्रत्येक दिन पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
विगत २४ घण्टाको अवधिमा ३३२ सङ्क्रमित फेला परेको जानकारी सरकारले बिहीवार अपराह्ण दिएको छ। बुधवार कुल २९८ जनामा कोभिड पुष्टि भएको थियो। सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्नुको एउटा कारण चाँडै सर्ने “यूके भेरिअन्ट” भनिने सार्स-कोभ-२ को नयाँ प्रकार भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले बताएका छन्।
“विगत केही हप्तामा यूके भेरिअन्टसँग मिल्दोजुल्दो प्रकारको भाइरस भेटिन थालेको छ। भारतबाट फर्किनेहरूमा एन्टिजन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएकाहरूमध्ये नमुना परीक्षण गर्दा पनि यो भेरिअन्टसँग मिल्दोजुल्दो प्रकार भेटिएको छ,” उनले भने।
“यसले छिटो सङ्क्रमण फैलिन्छ अनि कम उमेरका व्यक्तिहरूमा पनि बढी जटिलता हुन सक्ने, अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने तथा सघन उपचार आवश्यक पर्न सक्ने दर बढी हुने देखिएको छ।” राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेका परीक्षणमा गत छ सातायता उक्त प्रवृत्ति बढेको देखिएको उनले बताए।
नेपालले अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेकाको खोपबाट राष्ट्रिय खोप अभियान थालेको थियो नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस फैलिरहेकाले फेरि सर्वसाधारण मानिसहरू सजग हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।